पाथीभरा माताले हामी सबैको मनोकांक्षा पूरा गरुन आज भदौ ९ गते बुधबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस राशिफल ! - dautarimedia.com
पाथीभरा माताले हामी सबैको मनोकांक्षा पूरा गरुन आज भदौ ९ गते बुधबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस राशिफल !
sanjay August 25, 2021 1 min read
तपाईले दिनभर प्रतिकुलताको सामना गर्नुपर्नेछ। शारीरिक र मानसिक रुपले अस्वस्थता अनुभव गर्नुहुन्छ। अनावश्यक खर्च नगर्नुहोला। आध्यात्मिकता प्रति रुचि रहनेछ। लोभ लालचमा नफस्नुहोला।
तपाईको दिन आनन्दमय रहला। व्यापार र आय वृद्दि हुँदा लक्ष्मी माताको कृपा रहनेछ। परिवार र मित्रसँग आनन्दमय वातावरणको अनुभव गर्नुहुन्छ। नयाँ सम्पर्क र परिचय व्यापारको क्षेत्रमा लाभदायक रहला। पुरै दिन आनन्द र उल्लासमा बित्नेछ।
शारीरिक र मानसिक रुपले दिनभर प्रसन्नता छाईरहनेछ। व्यवसायिक क्षेत्रमा कार्यको प्रशंसा हुनाले कार्य प्रति उत्साह बढ्नेछ। सामाजिक क्षेत्रमा मान-सम्मान प्राप्त हुनेछ। परिवारसँग आनन्दपुर्वक समय बिताउनुहुन्छ। व्यवसायमा पदोन्नति होला।
तपाईको भाग्य वृद्दि हुने योग छ। विदेश वा टाढास्थित देशबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। छोटो वा धार्मिक यात्रा हुने योग छ। शारीरिक रुपले स्वस्थ रहनुहुन्छ। व्यवसायिक क्षेत्रमा लाभ प्राप्त होला। विदेश जान प्रयासरत र धार्मिक कार्यमा सफलता प्राप्त होला।
स्वास्थ्य प्रति अधिक ध्यान राख्नुहोला। स्वास्थ्यमा खर्च हुनेछ। घरको नै खानपिन गर्दा लाभदायी होला। वैचारिक स्तरमा नकारात्मकता छाईरहनेछ। आध्यात्मिकता प्रति रुचि, ध्यान तथा जपले उचित मार्गमा लिएर जानुहुनेछ।
तपाईको लागि शुभ दिन छ। प्रसिद्दि प्राप्त हुँदा दिन सरल रहनेछ। व्यापारको क्षेत्रमा सहकर्मीको सहयोगले सकारात्मकता बढ्नेछ। कपडा खरिद गर्नुका साथै मन आनन्दित रहनेछ। मित्रसँग आनन्द समय बिताउनुहुन्छ।
तपाईको स्व्स्स्थ्य स्वस्थ रहला। व्यवसायिक क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ। परिवारसँग आनन्दपुर्वक समय बिताउन सक्नुहुन्छ। कार्यमा सफलता र प्रसिद्दि प्राप्त होला। बोलीमा ध्यान राख्नुहोला। अत्यधिक खर्च बढ्नेछ।
वाद-विवादमा नफस्नुहोला। सन्तानको विषयमा चिन्ता रहनेछ। विधार्थीको अभ्यासमा सफलता प्राप्त हुनाले उत्साह वृद्दि हुनेछ। भविष्यको लागि आर्थिक योजना बनाउनुहुनेछ। परिश्रमअनुसार सफलता प्राप्त होला।
मानसिक रुपले उत्साहको अभाव रहनेछ। जसकारण मनमा अशान्ति बनिरहनेछ। पारिवारिक वातावरण झगडापूर्ण रहनेछ किनकि परिवारसँग झगडा हुन सक्ला। धनहानिको योग छ। आमाको स्वास्थ्यको विषयमा चिन्ता रहनेछ।
मित्र र परिवारसँग दिन आनन्दपुर्वक बिताउनुहुनेछ। कुनै पर्यटन स्थलमा यात्रा होला। शारीरिक र मानसिक रुपले स्वस्थ रहनुहुन्छ। आर्थिक लाभ हुनुको साथै नयाँ कार्यको आरम्भ गर्नुहुनेछ। विधार्थीको समय अनुकुल छ।
मानसिक रुपले दुविधा अनुभव होला। कुनै निश्चित निर्णय लिन कष्ट हुनेछ। अनावश्यक खर्च हुन सक्ला। विधार्थीको अभ्यासमा मन एकाग्रता रहनेछैन। कार्य सफलता प्राप्त होला। परिवारसँग झगडा हुन सक्ला।
शारीरिक र मानसिक रुपले स्वास्थ्य प्रसन्नताले भरिपूर्ण रहनेछ। उत्साहपूर्ण वातावरण हुनाले नयाँ कार्यको प्रारम्भ गर्ने प्रेरणा मिल्नेछ। पारिवारिक वातावरणमा सुख-शान्ति बनिरहनेछ। मित्र र परिवारसँग भ्रमण गर्नुहुनेछ। धार्मिक यात्रा अथवा धार्मिक कार्य हुने योग छ।
Previous: एकपछि अर्की अभिनेत्रीको MMS भिडियो लिक, आक्रोशित हुँदै दिए यस्तो प्रतिक्रिया
Next: २२ रुपैयाँमा छानी-छानी ग’र्लफ्रेण्ड